Ihe kpatara na anyị hụrụ n'anya n'anya ụfụfụ ma ọ bụ matraasi
M na-eji 1n2222 pnunction na-ebugharị site na redio. Jikọọ njikọ PIN nke Arduino \_ 'na ala nke tractor (PIN). A ga-atụkwasị obi na-eguzogide n'etiti eriri PIN na PINT Center Pin (Lee foto). PIN onye na-anakọta (PINMSMOST) na ala. Jikọọ ezi ndu nke waya na 5 v nke ọkọnọ.
Na mgbakwunye na ilekọta anụ mmanu mmanu, na-eji ezigbo ihe ịchọ mma, na-eri nri dị mma, mmadụ ga-ezute dọkịta iji kparịta ihe ọ bụla iji kpochapụ ihe ọ bụla. You nwere ike iji ọgwụ ndị ọnụ ọnụ dị ka ihe vitamin a. E nwere ude mpaghara nwere otu mmiri ọgwụ dị ka ịchịkwa mmepe acne. Jiri acne creata mee ihe n'okwu a ma bibie ihe kpatara ya ma mee ka ọ bụrụ ọnya gị -
Mgbe ahụ ịchọrọ iwere wires nke anyị na-aga n'ihu oriọna na ndị anyị na-agabiga na karama ahụ na weld. Will ga-enwe ọtụtụ waya mgbe ị na-emekọ ihe ọnụ. Iji dozie nsogbu a, naanị dọpụta waya n'akụkụ nke ọzọ nke oriọna ahụ (